XALKA ALKAHA EE BORIC ACID: WAXA LOO BAAHAN YAHAY IYO MARKA AY CAAWISO, SIDA LOO DAWEEYO DHEGAHOODA, IYO SIDOO KALE XEERARKA CODSIGA IYO TILMAAMAHA LOOGU DIYAARIYO ISKU-DHAFKA BOQOLKIIBA 3 - WIXII MARTIDA
Ugu Weyn Ee Wixii martida
Maxay tahay qamriga boric acid ee loogu talagalay? Codsiga iyo tilmaamaha loogu talagalay diyaarinta 3 boqolkiiba isku dar ah
Daawadani waxaa hadda loo isticmaalaa daawada dadka iyo daawooyinka dhaqameed, iyada oo ay sabab u tahay hantidooda.
Boric acid waa xal in ethanol (70%), diirada taas oo kala duwanaan karto inta u dhexeysa 0.6 - 4.5%. Qosol la'aan.
Faa'iidada ugu weyn ee daawadani waa qiimo hoose oo leh saameynta ugu weyn ee isticmaalka. Dheeraad ah ayaanu u sheegi doonaa sababta loo baahan yahay iyo waxa la daaweyn karo. Sida loo xaliyo.
Daawadani waxay ka hortageysaa saamaynta taban ee isticmaalka. Iyo sidoo kale, nooca daawada ayaa u dhiganta?
Si loo fahmo tayada sifooyinka daroogada, waa lagama maarmaan in la baaro daawadan si faahfaahsan oo loo falanqeeyo waxa uu yahay.
Qoraalka. Xaqiiqdii, khamriga boric waa budo cad, taas oo ah mid daciif ah, qoyan oo aan ur lahayn.
Waxaa loo isticmaalaa sida jeermis dilaha iyo walxaha xasaasiga ah (antiseptic) taas oo dhexdhexaad u ah unugyada jidhka.
Waxaa loo oggol yahay in loo isticmaalo sida budo ah cudurada kala duwan ee maqaarka.
Dibed ahaan sida xalalka khamriga iyo aqueous iyo boomaatada.
Boric acid waxaa loo isticmaalaa si kasta:
sida jeermi-dilaha dadka waaweyn;
oo leh cudurrada indhaha si ay u daaweeyaan xannuunka 'conjunctivitis';
cudurrada maqaarka kala duwan (dermatitis);
geedi socodka bararka ee dhegaha (otitis).
Yaa lagugula talin?
Isticmaalka boric acid laguma talinayo:
bukaanka leh isbeddel xun oo ku yimaada hawlaha kelyaha;
dadka haysta dulqaad shakhsi ah.
Looma baahna in la isticmaalo daroogada meelo badan oo maqaarka ah.
Nooca iyo qiyaasta iibka
Boric acid waa la iibiyaa sida:
Khamriga seddex boqolkiiba (oo ah dhalooyin 40 ml ah iyo weelal 10 ml, 15 ml iyo 25 ml).
Oo budada ah si aad u isticmaasho dibadda (oo ah dhalooyinka 25 grams).
Si aad u diyaariso xalka, qaado 3 garaam oo budo ah oo iyaga ku daadi 4-6 qaado oo biyo ah karkaraya. Walaxda firfircoon ee daawooyinkan waa boric acid. Xalka qaabka qaybta dheeraadka ah waxay leedahay 70% khamri.
Daawooyinka Boric acid waxaa loo isticmaalaa laba ama saddex jeer maalintii. Sida caadiga ah, daaweyntu waxay dhacdaa 4-7 maalmood.
Waxqabadka jirka jidhka
Marka la kulmo, daroogada si fudud ayaa loo nuugo xiidmaha dhiigga. Iyo sidoo kale tallaabooyin soo noqnoqda ayaa laga helaa maqaarka iyo xuubka xuubka. Gaadiidka dhiigga, asiidhku maaha mid dhexdhexaad ah, laakiin wuxuu u guuraa qaab aan isbedelayn, oo badiyaa koofiyeyaashu (qiyaastii 90%), inta soo hartana waxaa lagu diidaa beerka xitaa (10%).
Maaddadan si tartiib ah ayaa loo saaraa, qiyaastii waa la sii daayaa 30-35 saacadoodqaybta kalena waxay ku jiri kartaa jirka illaa 5 maalmood.
Maaddadu waxay xannibaysaa xuubabka xuubka, waxay burburiyaan kelyaha waxayna si xun u saameeyaan unugyada dareemayaasha ee maskaxda.
Waa muhiim! Carruurta, iyada oo ay ugu wacan tahay unug aan la xakameynin iyo nidaamka difaaca daciifka ah, waxay keeni kartaa sumeyn iyo waxay keeni kartaa sarkhaan.
Daroogada leh boric acid ayaa loo oggol yahay in loo isticmaalo daaweynta geedi socodka bararka ee sinuska maxillary, isbeddellada xajmiga ee dhegaha iyo otis ee dusha sare ee xubnaha maqalka. Marka caabuqa dhegta ee dhegta, waxaad codsan kartaa xal seddex boqol oo khamriga ah ee boric acid.
Mabda'a daroogada waa in la beddelo qaabka borotiinka ee heerkulka gacanta iyo suubanka xuubabka, taas oo ka dhalatay taas oo ay u dhintaan.
Waa la oggol yahay in loo isticmaalo macdanta ilayska dhegta kaliya haddii dhakhtarka aan dhaawacneyn.
Maxaa indhahaaga kuula dhaqma?
Boric acid waxaa badanaa loo isticmaalaa daawada daaweynta cudurada kala duwan ee xubnaha aragtida. Inta badan tani xalku waxa loo isticmaalaa xinjirowga iyo infakshanka xuubka xabka ee isha.
Iyadoo ay jirto cabashooyinka, isticmaalka qalabka isha lagu maydho waa la ogol yahay. Waxay daaweeyaan ileyska indhaha iyo indhaha ah ee geeddi-socodka bararka.
Sidee loo isticmaalaa sida antiseptic?
Boric acid waa jeermi-farsamayaqaan badan oo aan loo isticmaalin oo kaliya fayadhowrka, laakiin sidoo kale lagu nadiifiyo boogaha nadiifka ah iyo marinada xubinta taranka. Iyadoo loo baahan yahay daawo qunyar-socod ah (antiseptic) waxay u baahan tahay in lagu daboolo laba ama seddex boqolkiiba saddex daawadan.
Boric acid ee dagaalka ka dhanka ah cayayaanka waxaa lagu dabaqaa xiriirka. Powder - sida sunta mindhicirka, ayaa loo adeegsadaa ficil ahaan, badanaa si loola dagaallamo baranbarada iyo dhirta.
Waxaa la dhigaa meelo ay cayayaanka u ururaan sidii hilibka qoyan ee labadaba qallalan iyo qoyanba. Jaantuska ficilku wuxuu u dhacaa si tartiib tartiib ah, sida uruurinta budada ee jirka ee cayayaanka ilaa 7-11 maalmood.
Astaamaha isticmaalka dadka waaweyn iyo carruurta
Calaamadaha ugu caansan ee dadka waaweyn iyo carruurta waa jeermiska maqaarka.
Dareen u yeelo! Sababtoo ah saameyno badan, waxoogaa xaddidan oo ku saabsan isticmaalka daroogadaas loogu talagalay carruurta ka yar 18 sano ayaa la soo saaray.
Dadka qaangaarka ah, daaweyntan ayaa hadda daaweynaysa barar, maqaarka iyo xannuunada. Daaweynta cudurrada dhegta, dhadhanka ayaa loo isticmaalaa (saxarada suufka ee la geliyo godka dhagaha). Qiyaas 10% oo leh glycerin ayaa loo isticmaalaa in lagu shubo finanka xafaayadda, iyo daaweynta injirta isticmaalkeeda.
Dhakhtarku wuxuu qeexayaa habka daaweynta, waana ka fiicnaan la'aanta in lagu sameeyo is-daaweyn sababtoo ah sunta daroogada.
Tilmaamaha loogu talagalay diyaarinta 3% isku dhafka khamriga
Diyaarinta naftaada xalka:
Si aad u hesho xal 3% ah oo asiidh ah, marka hore waxaad u baahan tahay inaad diyaariso shaashadda, marka la door bido khadadka miisaanka. Biyo raaci oo raaci. Ku shub 3.4 garaam oo boric acid ah dhalada qiyaasta oo ku dar 120 ml oo biyo ah karkaraya. Isku dar waligaa si fiican.
Kadibna waxaa lagama maarmaan ah in la xoojiyo xalka iyada oo loo marayo suufka ama faashadda faashadda daboolka badan leh.
Ku shub shaashad kale oo nadiif ah (nadiif ah), faashad adag. Ku kaydi khadka sare ee qaboojiyaha.
Xaaladaha noocee ah ayaa ku caawiya?
Talo soo jeedin. Isticmaalka daroogada ujeeddooyinkooda, waxaa lagama maarmaan ah in si taxadar leh loo akhriyo talooyinka, maadaama habka loo isticmaalo daroogada xaalad kasta oo shakhsi ah ay ka duwanaan karto.
Marka la eego, waxaanu soo jeedinaynaa inaan tixgelinno dhowr qaybood oo dad ah oo isticmaala boric acid si ay u caawiyaan ugu guuleysiga.
Hababka isticmaalka iyo codsiga:
Dhego xanuun. Saarida saxarada suufka ah ee godka dhegta.
Iyada oo la xakameynayo. Fidinta indhaha.
Laga soo bilaabo cagaha urta iyo dhididka. Waa in lagu shubo habeenkii kabaha budada ah. Oo subaxdii ku shub waxyaabaha ku jira.
Laga soo bilaabo fangaska ciddiyaha lugaha. Isticmaal biyaha qubeyska leh xal daciif ah oo boric acid ah.
Haweenka ku jira kondomoolka. Diyaargarowga waa in la nadiifiyaa, saxaarada lafdhabarta, daaweynta finanka finanka leh.
In qaan-gooyo laga bilaabo finan. Suufka suufka ah wuxuu kudajiyaa boric acid, tirtiraa meelaha dhibaatooyinka.
Dumarka dhalinyarada ah ee lagu dhibaateeyo. Isticmaalka maalin walba ee daawada ugu yaraan laba toddobaad.
Waxyaabaha ku jira diyaarinta, ma ahan mid saameyn lakab ah. Laakiin haddii bukaanku leeyahay xaddi badan oo ka mid ah wakhtiyada xiriirka ah ee nabarrada furan, dhaawacyada maqaarka, ama isticmaalka dheeraadka ah, tani waxay sababi kartaa astaamaha suuxdinta daba dheeraatay.
Waxaa lagu muujiyey calaamadaha soo socda:
Isbedelada habka dhexe ee neerfayaasha;
Cudurrada cudurrada dhegta ka difaaca: "Tsipromed", "Otofa", "Fugentin".
Anti-barar - "Otipaks", "Otinum".
Cudurka indhaha: levomycetin, dexamethasone. Iyada oo dystrophy-retina: emoxipin ", giigsane, aktipol.
Cagaarshowga: "Eplan", "Maqaarka", "Zinocap".
Isticmaal taxaddar leh boric acid waxay caawisaa hagaajinta caafimaadka, marka laga reebo caawinta xallinta dhibaatooyinka arrimaha qaarkood, iyo daroogada ayaa si xor ah uga iibsan kartaa farmashiyaha. La socoshada tallaabooyinka badbaadada oo kaliya oo uu soo qoray takhtarka daawadan, waxay keenaysaa saameynta la rabay.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Wixii martida 2019